इमान्दार मिडिया नयाँ स्वरुपमा — Imandarmedia.com
गतिशील समय र परिवर्तनशिल समाजमा प्रविधिको पनि बिकास हुँदै जान्छ । विज्ञानको नियमअनुसार हरेक पुराना चिजको अन्त्य हुन्छ र त्यसको ठाउँमा नयाँ बस्तुको बिकास हुन्छ । यो मान्यतालाई आत्मसात गर्दै इमान्दार मिडियाले बिज्ञानको परिवर्तनको पाटो पहिल्याउने कोशिस गरेको छ ।
हामी हाम्रो मिडिया संचालनको करिब १० महिनापछि नयाँ डिजाइनका साथ आएका छौं । हुन त हामीले इमान्दार मिडियाको परिक्षण प्रकाशन/प्रसारण गत बर्ष साउनमै गरेका थियौ । तर बिबिध कारणबस हामीले लगत्तै सुरु गर्न सकेनौ र २०७३ मङ्सिर २१ गतेदेखि नियमित प्रकाशन/प्रसारण आरम्भ गर्यौ ।
डिजाइनको हिसाबले भने अरु कयौं साइटहरुभन्दा हजारौ गुणा राम्रो डिजाइन इजिसफ्ट नेपालले गरेकै थियो । यसका बाबजुद पनि हामीले इमान्दार मिडियालाई केहि नयाँ बनाउने योजना बनायौ । हाम्रो अफिसियल योजना सँगसँगै त्यसमा सबैभन्दा बढी चासो र एडभान्स डिजाइन गरेर संचालन गर्ने इच्छाशक्ति इजिसफ्टका डिजाइनर मुक्ति अधिकारीले देखाउनुभएको थियो ।
हाम्रो टीमले उहाँको चासो र योजनामा नै योजना थप्यो फलस्वरुप हामीले अनलाइनलाई नयाँ-नयाँ फिचरले भरिपुर्ण बनाउने कन्सेप्टसहितको नक्सा इजीसफ्टलाइ पठाईसकेपछि डिजाइन कोर्डिङ कार्य सुरु गरियो । नेपालमा अनलाइन मिडिया डिजाइनमा एउटा रोग छ, कुनै विदेशीले बनाएको थेम किन्ने र त्यसमा अनेकथरि प्लगइनहरु प्रयोग गरेर कम्पोज गर्दै डिजाइन गर्ने । बाहिरबाट होम पेज केहि मिलेको जस्तो देखिए पनि थेम प्रयोग गरी बनाइएका डिजाइनहरु जहिलै खतराको घेराभित्र रहेका हुन्छन् ।
नेपालका केही वेब डिजाइन कम्पनिहरुले कस्टम डिजाइन गर्ने गरेका भएता पनि ति डिजाइनहरु बनाउन लाग्ने वास्तविक खर्च भन्दा निकै महंगा हुन्छन् । त्यस्ता डिजाइनहरुमा अझ भने र चाहेजस्तो फिचरहरु बनाउन सकेको देखिदैन । लोकल सिएमएस प्रयोग गरेर बनाइएका कस्टम डिजाइन नै भएपनि तिनका ड्यासबोर्डहरु निकै झन्झटिला हुन्छन् । त्यस्ता डिजाइनका ड्यासबोर्डहरुमा कन्टेन, फोटो, भिडियोहरु पोस्ट गर्न र आफुले चाहेअनुसार न्युज डिस्प्ले गराउन निकै समस्या हुन्छ।
नेपालका वेब डिजाइनरहरुलाई कस्टम डिजाइन गर्न फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै गाह्रो भइरहेको बेला इजीसफ्टले सजिलै भनेजस्तो कस्टम डिजाइन गर्नसक्ने क्षमता राख्ने कुरा हामीलाई थाहा थियो । त्यसैले हाम्रो मिडियाको टीम इजिसफ्टको टीम संगसंगै रहेर नयाँ फिचर र प्रविधिको प्रयोग गर्दै हामीलाई आवश्यक पर्ने सबै सेवासुबिधासहितको अनलाइन डिजाइन गरियो ।
इजीसफ्टले अझै पनि इमान्दार मिडियाको डिजाइन ८० प्रतिशत मात्रै सकिएको र थप केही काम गर्न बाकी रहेको जानकारी दिएको छ । त्यस हिसाबले भन्ने हो भने हाम्रो डिजाइन अझै उत्कृष्ट हुने लगभग निश्चित देखिन्छ । त्यसमा हामी ढुक्क छौं ।
हामीले नयाँ डिजाइन लन्च गरिसकेपछि हाम्रा पाठक, श्रोता, विज्ञापनदाता र शुभचिन्तकहरुका सल्हा सुझावहरू ग्रहण गर्दै थप परिमार्जित र परिस्कृत गर्दै जाने छौ । त्यसपछि मात्र हाम्रो डिजाइनले पूर्ण रुप लिने छ ।
इमान्दार मिडिया सञ्चालनको बिगत १० महिनाको अवधिमा लेखक, साहित्यकार, सूचना, समाचारदातालगायत समाजको ठूलो पंक्तिबाट उत्साहजनक साथ, सहयोग र समर्थन समेत प्राप्त हुन थाल्यो। यही अवधिमा पाठक वर्गबाट समेत असाध्यै ठूलो विश्वास, माया र साथ पाउन इमान्दार मिडिया समर्थ भयो । विभिन्न प्राविधिक तथ्यांक एवम् अन्य विविध माध्यमहरुमार्फत प्राप्त नतिजा र ‘फिडब्याक’हरुले यो कुरालाई पुष्टि गरिरहेका छन् ।
सबैतिरबाट प्राप्त यही हौसला, प्रेरणा र सदभावबाट विश्वस्त हुँदै हामीले हाम्रो अनलाइनको नयाँ डिजाइन लन्च गरेका छौं । हामी पुनः हाम्रो प्रकाशन/प्रशारण प्रारम्भ गर्दा जारी गरिएकै प्रतिबद्धता, अपेक्षा र अनुरोध दोहोर्‍याउन चाहन्छौं ।
हामी परिबर्तनको पक्षधर हौं । हाम्रो अफिसियल धारणा भनेको देशमा आमुल परिवर्तन ल्याउनका लागि सधैं एककदम अगाडी रहनु हो । त्यसका निम्ति संघर्ष गर्ने र लड्ने हरेक व्यक्ति, समाज तथा शक्तिको गुण अनि दोषका आधारमा समर्थन वा बिरोध गर्नुपर्छ भन्ने हो।
इमान्दार मिडिया अस्तित्वमा आएसंगै हामीमाथि चासोकासाथ केहि प्रश्नहरु पनि उठ्ने गरेका छन । जस्तै यो मिडिया कसले चलाएको रहेछ ?’ अथवा ‘यो मिडिया कसको नजिक छ ?’ कुन पार्टी निकट छ ? इत्यादि ! तर यी सबै प्रश्नहरुको हामीले दिने एउटै जवाफ हो- इमान्दार मिडिया कुनै पार्टीले चलाएको सञ्चार माध्यम होइन र कसैको नजिक पनि छैन । हामीलाई कुनै राजनीतिक शक्तिको मुखपत्र, पिछलग्गू वा समर्थक अथवा विरोधी हुनु छैन । थिएन, छैन र कुनै हालतमा हुँदैन पनि ।
हरेक घटनाको वास्तविक सत्य र तथ्य सूचना पाउने आम जनताको अधिकारलार्इ सम्मान र संरक्षण गर्दै सन्तुलित विचार र स्वस्थ मनोरञ्जनका सामग्री पस्कनु नै हाम्रो कर्तव्य हुनेछ । वैचारिक दृष्टिले सबै राजनीतिक प्रवृत्ति, विचार, शक्तिप्रति निरपेक्ष रहँदै तिनका गतिबिधि समाचार सूचना र जानकारी प्रकाशित/प्रशारित गरेर हामीले मिडिया हुनुको भूमिका पुरा गर्ने छौं।
कुनै पनि जनसरोकारका बिषयहरु हाम्रा समाचारका सुत्रहरु हुन्। इमान्दार मिडिया सबै विचारधारा र मान्यताबीच स्वस्थ एवम् मर्यादित ढङ्गबाट तर तीव्र तथा पेचिलो तरिकाले बहस–छलफल र विचार–विमर्श गर्ने साझा थलोका रुपमा अगाडि बढ्नेछ । त्यसैले यसमा सबै खाले विचार, लेखहरु, अन्तर्वार्ता, समाचार र सूचनाहरुले स्थान पाउने छन् ।
हामीलाई यो १० महिनामा न्यानो माया, स्नेह, सहयोग र सदभाव प्रकट गर्नुभएका आदरणीय प्रिय पाठक बर्ग, विज्ञापनदाता, सूचनादाता लगाएत सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरुप्रति कृतज्ञता एवंम् हार्दिक अभिवादन टक्र्याउँदछौं । उहाँहरू सबैबाट आगामी दिनका कठिनतम यात्राका क्रममा झन् बढी साथ, समर्थन र सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने कुरामा समेत हामी विश्वस्त छौं ।
अहिलेसम्मको हाम्रो प्रकाशन/प्रशारणको अबाधिमा रहन गएका कमी–कमजोरीलाई सच्याउदै आगामी दिनमा यथाशक्य प्रभावकारी ढङ्गबाट देश र आम नागरिकको सुचनाको सम्बाहक बन्ने उदेश्यमा सधै कटिबद्ध रहने प्रतिबद्धता पुनः जाहेर गर्दछौं ।
अन्तमा इमान्दार मिडियाको उत्कृष्ट डिजाइन गर्न निरन्तर रातदिन भिडिरहने इजिसफ्ट नेपालको डिजाइननर टीम र मुक्ति अधिकारीलाई बिशेष धन्यबाद। आगामी दिनमा हाम्रा श्रदेय पाठक, श्रोता, बिज्ञापनदाता र शुभ-चिन्तकहरुबाट निरन्तर सल्लाह सुझाब र सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं ।